12 Ungadliwa! Ukwelashwa kwama-pancreas ngemithi yesintu! > Amanyikwe
Ungayiphatha kanjani i-pancreas ngemithi yesintu
Nakekela ama-pancreas. Wenza imisebenzi eminingana ebalulekile nasezigulini zamanyikwe, wonke umsebenzi obalulekile womzimba uphazamiseka!
Ukwelashwa kwama-pancreas ngemithi yesintu. Ama-pancreas - abhekisa izindlala ze-endocrine futhi enza imisebenzi emibili ebalulekile - ukukhiqizwa kwe-insulin nama-enzyme okugaya ukudla okungena emathunjini. Okuvame kakhulu isifo se-pancreatic - Le yi-pancreatitis (i-acute and chronic) kanye nesifo sikashukela sezinhlobo ezahlukahlukene.
I-pancreatitis - Lokhu inqubo yokuvuvukala kumanyikwe, kungaba sendawo ngokwemvelo noma ukumboze ngokuphelele. I-pancreatitis kungenzeka ngenxa yezizathu ezahlukahlukene - izifo ze-gallbladder, okuholela ekuqhekeni komgudu we-biliary, ukudakwa kakhulu, i-trauma, ukutheleleka, izifo ezithinta izicubu, njll.
Ukuphazamiseka okukhulu pancreas kungaholela kushukela. Imbangela enkulu yesifo sikashukela yi-pancreatic arteriossteosis, ukukhuluphala kanye nesimo sofuzo. Ukuphazamiseka kwepancreatic kungazwakala ngomlomo owomile.
Ukwelashwa kwama-pancreas ngemithi yesintu - Lokhu ngokuyinhloko ukuhlanza kwamanyikwe kanye nemikhumbi yawo ezintweni ezinobungozi nama-cholesterol plaque. Ukwelashwa kwama-pancreas ngamakhambi nangezinye izindlela zesintu kunikeza imiphumela emihle. Ngaphezu kwalokho, ezinye zazo azinayo incazelo yesayensi, kepha, nokho, zibhekana kahle nezifo eziphathelene nokulimala, kufaka kulezo zimo lapho ukwelashwa kwendabuko esibhedlela noma emtholampilo kunganikeli imiphumela elindelekile.
Ukwelashwa kwama-pancreas amakhambi esintu adinga ukudla okulungisiwe kanye nohlobo losuku (ikakhulukazi maqondana nezikhathi zokudla).
Lapho i-pancreas ihlasela, ekudleni kubaluleke kakhulu. Okokuqala, ushukela nawo wonke amaswidi kufanele angabandakanywa (kuphela uju olungenziwa kumaswidi), kanye notshwala, ukubhema, okunamafutha, isipayisi, okuthosiwe. Akunjalo, uma kufanele udle ngokweqile, kanti futhi nokulinganisa, ukulinganisela nokulinganisela kufanele kubhekwe. I-Buckwheat ne-oatmeal zikhonjiswa ikakhulukazi.
Udinga ukuphuza amanzi amaningi okuphuza okuhle. Ungaphuza amanzi kalamula, ukulungiselela lawo okudingeka ucwilise ujusi welamula engilazini yamanzi.
Ukwelashwa ngamakhambi abantu futhi ukondliwa okufanele kwezempilo kuwumkhuba wakudala futhi osebenzayo impela. Uma ama-pancreas wakho ethintekile, sebenzisa okulandelayoamakhambi abantulokho kuzokusiza welapha i-pancreas futhi ususe izinhlungu.
Enye yezimbangela ezinkulu zalesi sifo ukusetshenziswa kotshwala ngamanani amakhulu. Ngaphezu kwalokho, izifo ze-pancreatic zingabangelwa:
ukudla ngokweqile kwamafutha noma ama-carbohydrate,
ukulimala kokuqagela kwesitho,
ubuthi, ukutheleleka, ukuthatha izidakamizwa ezingahambisani nama-steroid.
Uma kwenzeka kuba nenkinga, ukwelashwa kwama-pancreas ngemithi yesintu osekuyisikhathi eside kunezindlela zokufakazelwa kungadingeka. Izimpawu zalesi sifo zibonakaliswa ikakhulukazi yizinhlungu, i-tachycardia, i-dyspepsia, isicanucanu futhi ngisho nokuhlanza okuninginingi okufika ku-hypochondrium yangakwesobunxele noma emuva ephansi. Ukujuluka kunganda, futhi amehlo angaba nesibindi.
Lokhu kwenzeka ngoba indlala ekhanyayo iqala ukufaka ingcindezi esibindini, okwenza kube nzima ukuthi isebenze.
Kubaluleke kakhulu ukwelapha ama-pancreas ngemithi yesintu kulabo, ngasizathu simbe, abanobunzima ngamakhambi endabuko. Isibonelo, izidakamizwa ezifana ne-Diclofenac, i-Famotidine, i-Omeprazole, iBarralgin, kanye nePancreatin ayiphephile kuwo wonke umuntu. Abanye abantu bangahle babe nayo noma bangahambelani neminye imishanguzo ephuzwa ngokuhlelekile.
Umuthi we-herbal yindlela eyaziwayo yabantu yokwelapha i-pancreas. Umuthi we-herbal awusetshenziselwa ukwanda kwezifo ze-pancreatic, noma kunjalo, enkambweni engapheli enjalo, kunconywa odokotela abaningi. Ngokuhambisana nokwelashwa, kubalulekile ukugcina ukudla - ukudla okufanele kusiza ukugcina imisebenzi yesitho. Kuyadingeka ukuthi ubheke izindlela zokupheka ezidume kakhulu ezingasiza ama-pancreas abuyele kwesejwayelekile. Lezi zindlela zokwelapha zilungele isibindi namanyikwe:
Ukufakwa umhlonyane. 1 tbsp. l uthele izinto ezingavuthiwe nge-1 ingilazi yamanzi abilayo, ikhava, ihora lokugcizelela.
Ukuhlwanyela kuka-Alfalfa. 2 tsp amakhambi athelwa 1/3 litre wamanzi abilayo. Sigcizelela isigamu sehora, thatha i-sip phakathi nosuku.
Ngendlela efanayo, siphikelela nge-1 tbsp. l ukhiye engilazini engu-1 yamanzi.
Impande ye-Dandelion. 2 amahora, sigcizelela ama-50 g amakhambi, athulule 1/3 litre wamanzi abilayo. Kathathu ngosuku, ngaphambi kokudla, thatha ingxenye yesithathu yokumnika. Ngendlela efanayo, ungaphikelela nge-chamomile.
Pink Rhodiola. I-tincture evela esitshalweni kufanele ithathwe uhhafu wehora ngaphambi kokudla amaconsi angama-20.
Kusho okusuka kwepropolis. Kungabhungwa noma kusetshenziswe njengesibambiso. I-1 tsp okugcina kungathuthukisa kakhulu ukusebenza kwe-pancreatic. Futhi i-tincture yotshwala ingaba ngcono kakhulu. Ukuze wenze lokhu, ama-50 g we-propolis afakwa ku-100 g yotshwala, ngemuva kwalokho bathatha lolu ketshezi ngobisi - amaconsi ayi-15 ngengilazi eyodwa. Enye indlela ukuhlanganisa ingxenye eyi-1 ye-propolis nezingxenye eziyi-9 zamanzi emazingeni okushisa angama-60 ° C. Phikelela ngosuku, bese usebenzisa.
Ingxube yezokwelapha. Gaya i-1 kg kalamula no-1/3 kg we-parsley ne-garlic. Hlanganisa kahle. Thatha i-1 tsp. Imizuzu engu-15 ngaphambi kokudla.
Imali yokwelashwa. Sihlanganisa i-10 g yembewu dill nezimbali ze-violet, izimpande ze-elecampane (20 g), izimpande ze-valerian (30 g). Kwinkomishi e-1 yamanzi abilayo - 1 tbsp. l ingxube, ngemuva kwalokho gcina amazinga okushisa esezingeni lokubilisa elinye ihora lehafu (usebenzisa ibhati lamanzi) bese kuthi ukuma imizuzu eyi-15. 1 inkomishi yokumiliselwa yakhelwe usuku.
Izihlobo. I-Oatmeal ne-Buckwheat ngamanani amancane angayisekela i-pancreas. Sebenzisa kahle inkomishi ye-kefir. Into esemqoka - okusanhlamvu akufanele kube nosawoti.
Cindezela I-compress yogurt ejwayelekile esetshenziswa endaweni ethintekile ebusuku ingathuthukisa umsebenzi wesitho.
I-Teas ekhethekile nama-infusions asuselwa eSt John's wort, calendula, marshmallow, Swamp, birch buds, chamomile, peppermint, motherwort kanye ne-dieelle. Faka kusuka engxenyeni yehora kuya ehoreni, bese uphuza inkomishi engu-1/3 isigamu sehora ngaphambi kokudla kathathu ngosuku.
Siphatha oats nefilakisi
Amakhambi we-Folk ekwelapheni ama-pancreas afaka ukusetshenziswa kwefilakisi nama-oats. Kusukela kokuqala kungcono ukupheka i-jelly. Imboza kahle izindonga zezitho zokugaya, isiza ukudambisa izinhlungu nobuhlungu, ivuselele amasosha omzimba, yehlise umfutho wegazi ne-cholesterol. Beka i-1 tbsp. l I-200 ml yamanzi, upheke imizuzu eyi-10, bese siphikelela ngehora eli-1. Udinga ukuphuza ukufudumala okunjeya, njengoba sekuhlungiwe ngaphambi kwesikhathi. Ngemuva kwengxenye yehora, ungadla.
Manje cabanga izindlela zokupheka eziphumelela kakhulu kusuka ku-oats:
Ama-tinctures we-okusanhlamvu okungafakwanga. Ukuze ulungiselele uketshezi olunjalo, ama-oats afakwa emanzini amahora angama-24, bese omile futhi emhlabathini ngokucophelela.
Umhluzi oat. Okhokho bethu baphathwa ngale ndlela, ngakho-ke indlela izibonakalise kahle kusukela ezikhathini zasendulo. Powder from germated oat okusanhlamvu kwenani le-1 tsp. uthele inkomishi eyodwa yamanzi, upheke isigamu sehora, ngaphandle kokuletha amanzi kumathumba, emva kwalokho siwaphuze wonke. Uma ukuvuvukala kwe-pancreas kuqhubeka esigabeni esibuhlungu, i-1 tbsp. Ibekwe esilinganisweni samanzi. l izinto zokusetshenziswa, kodwa upheke imizuzu emi-2 kuphela. Udinga ukuphuza i-decoction enjalo ngaphambi kokudla futhi hhayi nge-gulp eyodwa, kodwa ngama-sips amancane.
Oats ephelele. Amandla avela kulokhu asebenza kakhulu ngesikhathi sokuxolelwa, esiza ekwelapheni lesi sifo. Ngamalitha amathathu amanzi udinga inani elilinganayo lezingilazi zikafulawa. Ukupheka kuthatha amahora ama-3. Thatha inkomishi eyodwa yomhluzi ngaphambi kokudla.
Ungazivuselela kanjani izimpawu zokuvuvukala
Nge-pancreatitis, isiguli singase sizwe izinhlungu ezihlala njalo eziphazamisa impilo, ukulala nomsebenzi. Umuthi wendabuko unikeza izindlela eziningana eziphumelelayo zokususa umuntu ekuphazamiseni okunjalo:
Ngosuku lokuqala lwenkinga yesifo esibi, kufanele wenqabe ngokuphelele ukudla, awukwazi ngisho nokusebenzisa amasaladi ekudleni, kepha kuyanconywa ukusebenzisa amanzi amaminerali. Kufanele kungabi ne-carbonated, futhi kufanele kudakwe amahlandla ama-4 ngehora, ukuncipha okuningi.
Ikhumbula ukwanda komhluzi we-dogrose. Ungaphuza itiye elimnyama elibuthakathaka. Siqala ukuthatha ukudla lapho izinhlungu zincipha. Ekuqaleni - izingxenye ezinesizotha ngangokunokwenzeka. Ngemuva kokudla ngakunye, kufanele kubhalwe ukuthi izinhlungu ziya ziba zimbi futhi.
Uma ukuphazamiseka kwe-dyspeptic ngesimo se-nausea nokuhlanza kubhekwa, ke, ngaphezu kweMotilium noma i-Tserukal eyaziwa ngabaningi, ungasebenzisa iresiphi yakudala yokuqoqa amakhambi. Ukuze wenze lokhu, thatha u-30 g we mint no dill imbewu, 20 g ye-hawthorn ne-dieelle kanye ne-10 g ye-chamomile. Brew 1 tbsp. l kuxuba ku-300-400 ml wamanzi, emva kwalokho sithatha isigamu seglasi ihora ngaphambi kokudla, kathathu ngosuku.
Uma ukususwa kwe-bile kuyadingeka, khona-ke kukhona iresiphi ekhethekile yamakhambi kuleli cala. Sithatha i-10 g yezinzipho ezomisiwe ze-marshmallow kanye nama-marigolds (okugcina kungenelwa esikhundleni se-calendula), i-15 g yarrow ne-20 g ye-peppermint, sikugaya ngokucophelela konke lokhu. Bay 2 tbsp. l amanzi abilayo, bamba imizuzu engu-15 kubhavu wamanzi, bese kuthi ngehora eli-1 siphikelele. Yamukelwe isigamu sehora ngaphambi kwesidlo sasekuseni nesasemini.
Uma kubuhlungu ngaphansi kwesisu, khona-ke lokhu kungaba wuphawu lokungagcini nje kokulimala kwamanyikwe, kodwa ama-cysts noma umdlavuza wesitho. Lapho uqinisekisa ukutholakala kwale nkinga, ukungenelela okusebenzayo kungakubaluleka ngisho nangosizo lomuthi womlingo onamandla kakhulu. Kodwa-ke, ngokuhambisana nokwelashwa okungapheli kanye nokulungiselela ukuhlinzwa, ukusabalala kwezicubu ezinobungozi kungancipha. Okokuqala, esimweni se-cyst, ngaphansi kwesimo esiphumelelayo sezimo, ukusebenza kungenzeka kungadingeki nhlobo - ukwakheka kuzoxazulula.
Kulokhu sisebenzisa ukumnika kwe-calendula, futhi okungcono - ukuqoqwa okuvela kulesi sitshalo, i-celandine ne-yarrow. Amathiphu avela emaqabunga omisiwe ama-blueberries, ama-lingonberry noma ama-currants amnyama asiza kahle. Uma umuntu enethuba lokuthenga i-mummy, khona-ke kufanele nakanjani ukwenze: le nto iyaziwa ngesilinganiso sayo esiphezulu sokususa ama-cysts, okuthatha kuphela izinsuku eziyi-10 kuye emasontweni ama-3.
Ngokuhambisana, udinga ukusebenzisa amaminerali angenawo amakhabhoni bese ulandela ukudla okuqinile.
Kuyaziwa ukuthi nge-cyst umuntu angaphila impilo yakhe yonke. Le nkinga iyivelakancane impilo futhi isiza kahle ekwelashweni ngamakhambi. Umdlavuza ungalashwa ngezinye izindlela kuphela ezigabeni zokuqala, ngoba ezigabeni ezilandelayo azisasebenzi. Abelaphi bayazi izindlela zokumisa ukuthuthukiswa kwesimila. Kukhona ezimbili zazo:
Ukufakwa kwezimpande ze-aconite. I-100 g yezimpande ibhalwe ilitha eli-1 lamanzi abilayo, kusetshenziswe ihora. Ngemuva kwalokhu, izimpande zidinga ukususwa futhi zinqunywe kumicu. Ukuzibuyisela emanzini, engeza utshwala ukuze ngokugcizelela okuthe xaxa zingaboli. Gcina endaweni efudumele futhi emnyama kwezinye izinyanga ezingama-2-3, emva kwalokho umkhiqizo ungathathwa.
Iqoqo le-herbal lezimbali ezibomvu ze-elderberry. 1 tbsp. l faka enkomishini e-1 yamanzi afudumele amahora amabili. Hlukanisa ingilazi ibe ngama-servings amathathu, thatha ngaphambi kokudla.
Ukudla kokuvuvukala kanye ne-pancreatic oncology
Ukudla kwabesifazane akuhlukile kulokho okwenzelwe abesilisa futhi asetshenziswa hhayi kuphela ekwenziweni kokwelashwa, kulwenza lula kakhulu, kepha futhi nokuvikela izifo. Noma kunjalo, iyasiza esibindini. Nawa amaphuzu asemqoka wokudla okwelapha kwezifo ze-pancreatic:
inyama nenhlanzi kufanele kudliwe okunamafutha amancane, kudliwe ngohlobo lwe-soufflé noma lokuthosiwe, kungafakwanga futhi kubheme,
amaqanda athosiwe kanye namaqanda "aboshwe" akuvunyelwe; esikhundleni salokho, lungisa i-omelet,
ungadla imikhiqizo yobisi ebilisiwe kanye noshizi we-cottage, kungcono ukungabusi ubisi,
amaphothi anciphile, imifino ebhakiwe nezithelo ezibilisiwe kuyanconywa, amajusi amasha, imifino nezithelo kufanele kugwenywe,
njengeziphuzo, kungcono ukusebenzisa amanzi asamaminerali, i-jelly, izithelo nama-berry,
kuyadingeka ukunciphisa, futhi kungcono ukukuqeda ngokuphelele, ukusetshenziswa kosawoti nokudla okunosawoti,
Amafutha, athosiwe, amnandi, ibhotela, isipayisi, utshwala nokudla okusheshayo akuvunyelwe ngokuphelele,
Awukwazi ukudla ukudla okusemathinini, umhluzi wenyama namakhowe.
Ukudla okunjalo kufanele kunikezwe izinyanga ezi-2, futhi uma umuntu ene-pancreatitis engapheli, kungcono ukunamathela ekudleni okucacisiwe ngaso sonke isikhathi. Lokhu ngeke kunciphise kuphela izimpawu eziyingozi, kepha futhi kuzonciphisa amathuba okuphinda abuyele ngaphansi. Kungcono ukuthi iziguli zingadli amahlandla ama-3 ngosuku, kepha ama-5-6, ezingxenyeni ezincane.
Ukwelapha ngokushesha ukuvuvukala kwe-pancreatic ngemithi yesintu kungaba ngumsebenzi onzima. Abakwazi ukuzisusa ngokuphelele ekubonakalisweni kwesifo, noma kunjalo, lapho sebebonile izimpawu zokuqala zalesi sifo, kungenzeka ukwelapha i-pancreas ngalezi zindlela. Ukwelashwa okuhlukile kusebenza ikakhulukazi uma kuhlanganiswa nezindlela zokwelapha. Ngaphambi kokusebenzisa izindlela zokupheka zemvelo, bonisana nodokotela wakho. Ngemuva kwakho konke, kunguchwepheshe esimweni ngasinye esithile esikwazi ukubona ukuthi singawaphatha kanjani amanyikwe.
Ukwelashwa kwama-pancreas ngemithi yabantu, esivivinywa isikhathi, akuphazamisi ukusetshenziswa kwezindlela ezingeziwe, ezivame ukuthembeka, zokuqeda inkinga.
Izimpawu zokuvuvukala kwe-pancreatic
Umgomo wokwelashwa ukuqedwa kwezimpawu:
Ubuhlungu obungaxhomekeki ekudleni kokudla. Ungayeki ngemithi. Imvamisa kuba khona umlingisi webhanti, okhanya ehlombe, ibanga lamahlombe, womabili ama-hypochondria.
Ukuphazamiseka kwengqondo kwe-dyspeptic kubonakaliswa ngokuhlanza okuphindaphindiwe, isicanucanu, izihlalo okuxekethile, ukushisa kwenhliziyo, ukubopha, ukuqhakaza kanye nokugcwala.
Ukuguqulwa kwesikhumba: i-jaundice, ukoma, i-pallor
Umfutho wegazi ophakeme kanye nokukhuphuka kwenhliziyo.
Ukwehla kwesisindo, ubuthakathaka, i-hyperhidrosis.
Lesi simo sidinga ukulaliswa esibhedlela ngokushesha emnyangweni we-gastroenterological.
Awukwazi ukudla ukudla ezinsukwini zokuqala ezingama-3-4, kepha kumele ulandele irejimeni yokuphuza ukugwema ukomisa. Yilapho ama-decoctions ahlukahlukene kanye ne-infusions eza khona ekusizeni.
Izimpawu zomazisi kanye nokuxolelwa kwe-pancreatitis engapheli. Ngakho-ke, ukwelashwa kwezifo ezithinta ukuvuvukala kwamanyikwe kuzoncika ekubandakanyeni kwenqubo, uhlobo lobuhlungu kanye ne-pathology ehambisana nayo yendlela yokugaya ukudla.
Ungawenza kanjani amakhambi we-pancreas?
Ezinsukwini zokuqala ngemuva kokuhlaselwa, ukusebenza kwamanyikwe kufanele kuncishiswe. Izimiso zokwelashwa zizohlose ukubuyisela umthamo ojwayelekile wokusebenza kwesitho esilimele, ukunciphisa ukukhiqizwa kwama-enzymatic secretion, kanye nokwehlisa ukwenziwa kwe-insulin ne-glycogen.
Ngesifo se-pancreatic, amakhambi esintu asiza ukwehlisa izimpawu zenqubo yokuvuvukala futhi kuzohloswe ngawo ukuqeda izimbangela zesifo. Isibonelo, ukuthatha ama-decoctions ezinhlotsheni ezithile zamakhambi kubangela ukuphikisana notshwala. Imvamisa ukususwa kwe-gallbladder kwanele ekuthuthukisweni kwenqubo yokuvuvukala kumanyikwe.
Ukusetshenziswa kwezinye izindlela zokupheka kunomthelela esikhathini sokululama ngemuva kokuhlinzwa futhi ngasikhathi sinye kudambise ukuvuvukala kwezicubu zomzimba.
Ngosizo lwama-decoctions kanye ne-infusions, imiphumela elandelayo yokwelashwa iyatholakala:
Ukukhiqizwa okwehlisiwe kokuqothuka kwe-pancreatic.
Ukuqedwa kwe-edema yezicubu.
Ukunwetshwa kwemicu ye-pancreatic.
Ukuhlanzwa kwemikhumbi ye-pancreatic kusuka kuma-plaque nezinto eziyingozi.
Ukwehla kwezimpawu zokubonakaliswa kwemitholampilo: ukuncipha kobuhlungu, ukuqina kwesitulo, ukubuyiselwa kokudla okunosawoti wamanzi.
Ungayiphatha kanjani i-pancreas ngemithi yesintu: izindlela zokupheka
Imigomo eyisisekelo yokuthi ungawaphatha kanjani ama-pancreas ngemithi yabantu
Ukukhethwa kwezindlela kufanele kuvunyelwane ngazo nodokotela oholayo.
Izici ezinenzuzo kanye ne-contraindication yamakhambi lapho kukhona i-concomitant pathology iyabhekwa.
Ukwelashwa kufanele kuqale ngomuthi omncane, kancane kancane ufike ku-100-150 ml ngosuku.
Thatha imali esiswini esingenalutho ekuseni.
Ukudla okuqinile kuyingxenye yokwelashwa.
Ungakhohlwa ngokuphuza uhlobo.
Akunconywa ukufaka amakhambi abantu esikhundleni somuthi.
Ekhaya, amakhambi esintu azobhekana ne-pancreatitis engapheli.
Ukusetshenziswa kwe-infusions, ama-decoctions ne-jelly kuzoba okuhlukahlukene ekudleni kweziguli ngesikhathi sokuphinda kubuye kube sezingeni lokuxolelwa.
Amakhambi e-Folk ekwelapheni ama-pancreas ayakwazi ukulwa nezinhlobo ezahlukahlukene zezifo zomzimba. Ngokuya ngesifo, ukukhetha enye indlela yokwelashwa nakho kuzoncika.
Ukwelashwa Kwe-pancreatic Herbal
Kuyadingeka ukwenza ukwelashwa kwama-pancreas ngamakhambi esintu afakazelwe. Akufanele uzame inhlanganisela yamakhambi noma eminye imikhiqizo yokudla ngokwakho, ngoba umphumela ongemuhle kumanyikwe ungadala ukuhlaselwa kwesibili noma isimo sobuhlungu. Ukusebenza kwamakhambi alandelayo kufakazelwa, okuvela kuwo imidwebo nezinqumo:
Celandine. Thatha imithamo emincane, ngoba isitshalo sinoshevu.
Akuwona wonke amakhambi angenzeka asetshenziswa ekwelapheni izinqubo zokuvuvukala kwamanyikwe. Futhi amakhambi axutshwe ngezilinganiso ezilinganayo ukuze athole isidakamizwa esinezinto eziningi.
Ama-Recipes ahloselwe emgomweni oyisisekelo: indlela yokubuyisela ama-pancreas.
Ukupheka umhluzi kwenzeka ngohlelo olujwayelekile: 2 wezipuni zezinto zokusetshenziswa ezingcolile kuthululelwa ngamanzi abilayo futhi kugcizelelwa ihora. Ngemuva kwalokho baphuza ukuqala ngomthamo omncane, kancane kancane befika ku-100 ml ngosuku. Thatha ama-decoction kathathu ngosuku imizuzu eyi-15 ngaphambi kokudla. Ngakho-ke, isenzo samakhambi senziwa ngokufakwa ngokuphelele ezingeni lamaselula.
Ama-decoctions atholwe kubhavu wamanzi azosizakala kakhulu. Sebenzisa i-thermos kuzokuvumela ukuthi ucindezele amakhambi phakathi nosuku.
Ama-infusions alungiswa kanjena: 500m wamanzi abandayo (noma afudumele) athathwa ngamagremu angama-50 wezinto ezingavuthiwe ezomile. Faka okungenani amahora angama-8 endaweni emnyama, epholile.
Umehluko wama-decoctions kusuka kumidwebo:
ayikwazi ukugcinwa isikhathi eside.
Sebenzisa izingxenye zezitshalo eziqinile: amagxolo, izimpande.
Ungayiphatha kanjani ifilakisi ye-pancreatic
Ithuluzi elihle ekwelapheni amanyikwe ekhaya yizimbewu zefilakisi:
Imbewu yefilakisi kade ifakiwe ekuvinjelweni kwezindlela zesintu, hhayi izifo zama-pancreas nezinye izitho zomgudu wokugaya ukudla, ezisetshenziswa kakhulu ezifweni zezinhlelo zokuphefumula nezenhliziyo, ezine-atherosulinosis kanye nokulimazeka kwezifo ezinamaphaphu.
Ijelly ephekiwe yefilakisi izoba yindlela engcono kakhulu futhi elula kunazo zonke. 1 isipuni sithululelwa engilazini yamanzi abandayo bese sibilisiwe imizuzu eyi-10, bese sigcizelelwa ihora.
Phuza isiphuzo esifudumele esiswini esingenalutho, ngemuva kokudla. Indlela yesibili ifaka ukuxuba izipuni ezi-3 zezinto zokusetshenziswa kanye ne-1 litre yamanzi abilayo, bese ukumnika ubusuku bonke. Ngaphambi kokusebenzisa, ujeli uyahlungwa.
Ungayiphatha kanjani i-pancreas ekhaya ngama-oats
Ukwelashwa kwama-pancreas ekhaya kungenzeka ngosizo lwama-oats. Izici ze-oats zifaka umphumela wokulwa nokuvuvukala. Ama-Hercule aqukethe isakhi esisiza ama-carbohydrate ukuthi amunwe. Ngokusekelwe kuyo, izidakamizwa zenziwa, okugeza okuvela kuma-oats kusetshenziselwa ukuphazamiseka kwe-metabolic. Futhi ngaphandle kwephalishi leHerculean, akukho nokudla okukodwa okuvunyelwe kwezifo zephephamzimba lesisu.
Iresiphi yokwenza umhluzi we-oat: ithisipuni eli-1 lefulawa kusuka ku-oat okusanhlamvu kuthululelwa ngengilazi yamanzi abilayo, abilisiwe isigamu sehora futhi aphuze afudumele. Lapho kunenqubo yokuvuvukala ebabazekayo, ukungcola kubiliswa imizuzu emi-2 kuphela futhi kuphuzwe ngezingcezu ezincane.
Izindlela zokupheka ezihlukile zibuye zisetshenziswe okusanhlamvu okuphelele. Powder kusuka ku-oats enjalo isetshenziswa esigabeni sokuxolelwa. Pheka isikhathi eside ukuthola ukuvuvukala okukhulu kunazo zonke. Le ngxube ibekwa esiqandisini.
Ungabuqeda kanjani ubuhlungu be-pancreatic
Isimiso esiyinhloko sokwelashwa kwe-pancreatic ekhaya ukususwa kobuhlungu nokuphazamiseka kwe-dyspeptic.
Izindlela zomzabalazo esontweni lokuqala le-pancreatitis ebukhali zibandakanya ukwenqiwa ngokuphelele kokudla, ukuphumula kombhede nokubanda endaweni yesitho esishisiwe. Noma kunjalo, iziphuzo kufanele zingashiywa, ngoba ziyingozi ukukhipha umzimba emzimbeni. Amakhambi we-Folk azosiza:
I-Rosehip decoction isiza ukudambisa ukuvuvukala futhi ithuthukise ukusebenza kwamasosha omzimba.
Ukwephulwa kwesitulo, kusetshenziswa inyoka ephezulu yenyoka. Izici zayo zokubuka ngezinkanyezi zisiza ngokuhanjiswa yisisu, ukuvuvukala nokucasuka kolwelwesi lwama-mucous. Ukhula lwesibili lokubhekana nokukhuphuka kwamathumbu yintamo enomdlavuza. Impande ihlelwe futhi ibhalwe ngengilazi yamanzi abilayo.
Imithi yokwelapha i-pancreatic cyst
I-pancreatic cyst i-pathological patity eye yavela ezicutshini zesitho. Kukhona amakhambi abantu ekwelapheni ukwakheka kwama-pancreas.
Ukwelashwa amazambane. Ukusetshenziswa kwamazambane aluhlaza kanye nejusi kusuka kuwo kunciphisa ama-cramps, kunemiphumela yokuphikisana nokuvuselela.
Ukulungiselela ujusi wamazambane osanda kufakwa, okungenzeka kuxutshwe namanye amajusi wemifino, njenge-karoti noma i-beetroot. Izici zohlelo lokusebenza zifaka kuphela ukusetshenziswa kwamazambane amasha - ukuphela kwehlobo nokuqala kwekwindla.
Ukusetshenziswa kwepropolis nemikhiqizo yenyosi. Ngokushesha nobuhlungu buyayeka uma uhlafuna ipolisidi lehora. Izenzo ezinjalo zifaka isandla ekuthuthukiseni ama-enzymes e-pancreatic, ukubuyiselwa kwezicubu ezifakwayo ngenxa yemiphumela ye-antimicrobial ne-antiseptic ye-propolis.
Kungenzeka ukusebenzisa i-propolis tincture, kepha kuphela ekuxolelweni. Umuthi uthathwa izinsuku eziyi-10-14.
Ukwelashwa kwemithi yesifo somdlavuza we-pancreatic
Lapho uthola isifo se-oncological, awukwazi ukwenza ngaphandle kokungenelela kokuhlinzwa. Ungayiphatha kanjani i-pancreas ekhaya - ngamakhambi abantu noma ngemithi, akusekho ndaba. Kodwa-ke, lapho ulungiselela ukuhlinzwa futhi usize izimpawu, kanye nokumisa ukukhula kwamaseli womdlavuza, umuthi wendabuko ubalulekile futhi ungasebenza izimanga.
Ukusetshenziswa kwama-alimondi ekudleni kuzomisa ukukhula kwesimila somdlavuza. Ukwakheka kufaka i-leatril yento, elimaza amaseli alimazayo.
Imbewu equkethe ama-lignans asetshenziswa ngendlela emsulwa noma ngosizo lwawo balungiselela ama-decoctions:
I-tincture ye-dieelle, calendula, yarrow ne-celandine isetshenziswa ezigabeni zokuqala zokukhula kwesimila, esisiza ukwehlisa ukukhula. Thatha isipuni 1 sento ngayinye eyomile eluhlaza bese uthela ama-500 ml wamanzi abilayo nengilazi ye-vodka, uthumele isonto lonke ukuyifaka. Udinga ukuphuza esiswini esingenalutho 1 isipuni izikhathi 3 ngosuku.
Ekwelapheni i-pancreas, kusetshenziswa amakhambi ahlukahlukene anhlobonhlobo, okungagcini lapho ngenxa ye-infusions kanye nama-decoctions amakhambi. Am Teas, okusanhlamvu, i-jelly kuzothuthukisa isimo sesiguli, yenze umsebenzi we-pancreas ube usujwayelekile futhi usize ukugcina ukudla.
Ukuthi ungawaphatha kanjani futhi kanjani ama-pancreas ekhaya
Uma uveze izinguquko ezihlukile lapho uhlola ama-pancreas, lokhu kukhombisa ubukhona be-pancreatitis. Ekuqaleni kwesifo, amakhambi abantu azosiza ukubhekana nezinqubo zokuvuvukala. Kunezindlela ezisiza ngesimo esibi sesi sifo, ukuba khona kwamatshe, izimpawu zomdlavuza. Ukubuyisela imisebenzi nokusetshenziswa kokuvimbela:
Ukwelashwa kwama-pancreas ngemithi yesintu akubeki eceleni izincomo zomuthi, kepha kuyithuba elengeziwe lokuhlela umzimba. Amakhambi e-pancreatitis asetshenziswa ngendlela yamanzi kanye ne-infusions yotshwala. Bakwazi:
ube nomthelela wokubulala amagciwane,
thinta ukukhiqizwa kwe-bile,
Ngokuqhakaza kwesifo, kubalulekile ukusebenzisa iqoqo le-herbal le-dieelle kanye ne-chamomile ekwelashweni. Kunconywa ukuyithatha kungabi ngaphezu kwamasonto amathathu, 100 ml ngaphambi kokudla okuyinhloko. Kuyadingeka ukukhipha ingilazi yamanzi abilayo ku-isipuni sawo ngamunye amakhambi, kupholile. Indlela ephumelelayo yokwelashwa ukusetshenziswa kwama-tinctures kusuka kuma-birch buds. Kuyadingeka ukuyiphuza ngesipuni ngaphambi kokudla, kathathu ngosuku. Indlela yokupheka ilula:
thatha ingilazi ye-birch efihlekile,
thintitha ngezikhathi ezithile.
Umhluzi oat nejeli
Odokotela bathola ukuthi une-ukuvuvukala ekuqaleni kwesifo noma ingabe isifo siyavilapha, sinezimpawu ezibucayi? Kulesi simo, ukwelashwa kwama-oats kuzosiza ukubhekana nenkinga. Amakhambi we-Folk - ama-decoctions ne-jelly - ayakwazi ukubuyisela ama-pancreas. Kungcono uma kusetshenziswa okusanhlamvu okuluhlaza. Indlela elula kunazo zonke incoma ukubilisa ama-oga ayi-100 g kwilitha lamanzi. Thatha isigamu sengilazi ngesipuni soju ngaphambi kokudla.
Kuthuthukisa lesi simo, kudambise izinhlungu nobuhlungu, ukusetshenziswa nsuku zonke kwe-oatmeal jelly ngaphambi kokudla kwasekuseni. Okokuqala isisekelo silungiselelwe. Ukuze wenze lokhu, faka ikhilogramu lama-oats epanini, engeza amanzi, uhambe usuku lube mnyama. Bese ukhipha amanzi, hlambulula ugaye okusanhlamvu. Ukuqamba sekumi ngomumo. Ukwenza ijeli:
thatha izipuni ezintathu zokuqanjwa,
engeza u-50 ml wamanzi,
uthele ingilazi yamanzi abilayo,
upheke imizuzu emi-3
shiya isigamu sehora ngaphansi kwesivalo.
Ukubambezeleka ekwelashweni kuyingozi
Uma kutholakala izimpawu ezinjalo zalesi sifo, kufanele kuthathwe izinyathelo eziphuthumayo zokuqeda ukuvuvukala kwalesi sitho, ngaphandle kwalokho i-necrosis yezicubu zomzimba kungenzeka.
Into yokuqala okufanele uyenze ukuthi uzihlanze. Funda kabanzi ngale ndatshana. Kuyadingeka ukuqinisekisa ukulamba okuphelele nesiphuzo esiningi samanzi amaminerali we-alkali. Ebuhlungwini obukhulu, kufanele uthintane nodokotela ohlinzayo ngokushesha. Ebuhlungwini obungapheli, ukwelashwa okuvame ukwelashwa.
Futhi ingadlala indima enkulu ekubuyiselweni kwesitho, okufakazelwe amakhulukhulu eminyaka wesipiliyoni, amakhambi esintu esifo se-pancreatic. Ngokuqinisekile bazokwehlisa ukuvuvukala, bathuthukise isimo esijwayelekile futhi basheshise inqubo yokuphola. Yikuphi izindlela ezikhona? Sizokujwayela lezo ezingaphekwa ekhaya.
Ngezibonakaliso zokuqala zokuvuvukala kwe-pancreatic - izinhlungu esifundeni se-epigastric sebhande, isicanucanu kanye nokuhlanza, istulo esingenamandla - kufanele uye esibhedlela. Uchwepheshe kuphela onganquma imbangela yesimo sakho futhi anikeze nokwelashwa okusebenzayo. Ungasebenzisa amakhambi abantu kuphela ngemvume kadokotela nangemuva kokunyamalala kwezimpawu ze-pathology enobunzima.
Kanye nokudla ujusi weklabishi noma amazambane, udinga ukulandela ukudla okuqinile: yenqaba ukudla okunosawoti nokunezipayisi, ukhohlwa ngokubhema nokushisayo. Asikho isidingo sokukhumbula imikhuba emibi. Iwusizo ngalesi sikhathi kukhona okusanhlamvu mucous kanye nesobho, inyama steamed, inhlanzi okuswelayo, imifino nezithelo.
Umuthi we-pancreatic herbal ngaphandle kokushiya ikhaya
1. Ngokuvuvukala kwama-pancreas, kulungiswa ikhambi elinjalo lekhaya: gaya u-300 g wegalikhi ehlutshiwe kanye ne-parsley ngokusebenzisa i-grinder yenyama. Ngendlela efanayo, ochotshoziwe futhi engezwa kuyo isisindo se-1 kg of ulamula ngaphandle kwembewu, kodwa kanye ne-zest. Ukuqanjwa konke kudluliselwa esitsheni esingenakulungiswa, kuvalwe ngokuqinile futhi kubekwe endaweni ebandayo amasonto ama-2.
Thatha isipuni esisodwa ngaphambi kokudla. Le ngxube ingahlanjululwa nge-infusion yokwelapha kusuka ku: iqabunga le-sitrobheli sasendle, i-blueberry ne-lingonberry, i-stigmas yommbila kanye nezimbotshana zamabhontjisi. Zonke amakhambi zithathwa izingxenye ezilinganayo. Engilazini yamanzi abilayo, kuzofakwa isipuni esiyi-1.
2. Kuyasiza ukuphuza i-tincture ye-iris kanye nomhlonyane. Baxubene izingxenye ezilinganayo baphinde basebenzise isipuni esisodwa sengxube engilazini yamanzi abilayo. Thatha ukumnika imizuzu engu-15 ngaphambi kokudla. Idosi: 50-80 ml.
3. Kuyasiza ukusebenzisa ekuseni ukumnika kafulawa we-buckwheat ku-yogurt. Ukuze wenze lokhu, kusihlwa thatha isipuni esisodwa sikafulawa uthele ingilazi yeyogathi (kefir).
4. Uma kwenzeka i-pancreatitis engapheli, iqoqo elinjalo lamakhambi lizosiza: isinamoni eyomile, imbewu yefilakisi, izimpande ze-magazus, notshani be-celandine. Athathwe kulesi silinganiso 4: 4: 2: 1. I-isipuni esisodwa seqoqo, phisa ingilazi yamanzi abilayo, unikeze amahora amabili ukwenza kanye nokuthatha u-100 ml.
5. Iqoqo elilandelayo lizibonakalise kahle: i-gangus izimpande, izimpande ezisusiwe, i-calendula, utshani be-celandine. Amakhambi athathwa ngesilinganiso esingu-5: 4: 4: 1. I-infusion ilungiswe ngendlela efanayo nasekwenzeni iresiphi edlule. Thatha u-50-70 ml kathathu ngosuku.
6. Ukwehlisa ukuvuvukala futhi kubuyelwe umsebenzi wesitho esiqoqa amakhambi: umucu wotshani, amaqabunga e-walnut, i-plantain ne-lingonberry. Thatha izinto zokusetshenziswa ngokwesilinganiso 2: 1: 2: 1. Ngendlela efanayo nakwezindlela zokupheka zangaphambilini, ukumiliselwa kulungiselelwe futhi kuthathwe.
7. Kusebenza ngempumelelo ekwelapheni iresiphi enjalo. Thatha i-800 g ye-parsley. Geza ugaye. Faka imifino epanini bese ugcwalisa ubisi luphelele (ukuze lumboze kuphela). Faka izitsha kuhhavini bese ulinda kuze kube yilapho ubisi seluncibilikile.
Ingxube ibese idluliswa ngesihlungo. Thatha umuthi njalo ngehora. Umthamo owodwa we-2 tbsp. nezinkezo. Usuku udinga ukuphuza le ngxube. Ukuthuthuka kuzobonakala ngokuphela kosuku. Futhi nokho - le yi-diuretic enamandla kakhulu.
8. Ikuvumela ukuthi ususe ukuhlaselwa kokufakwa kwe-pancreatitis yezimbali ze-dieelle. Ukuze usilungiselele kusihlwa, thatha i-10 g yalesi sitshalo bese uthele amalitha ayi-0,75 wamanzi abilayo (noma ahlanziwe). Phikelela ubusuku bonke. Thatha ingilazi eyodwa ngosuku. Inkambo yokwelashwa: amasonto amathathu.
9. Emuva ezinsukwini zakudala, ipancreas yayiphathwa nge-oats. Ukuze wenze lokhu, thatha i-0.5 kg yama-oats ekuseni bese uwagcwalisa ngelitha elilodwa lamanzi abilayo. Kufakwe ihora elingu-1, kuhlungiwe. I-infusion yathathwa ngo-100 ml.
10. Kuyaziwa ukuphatha indlala ubisi lwe-oat. Ungayipheka kanjani, sizokutshela ngemininingwane eminingi. Udinga ukuthatha ama-200 g wama-oats ephelele. Thela ngamalitha amanzi ayi-1.5 bese ubeka umlilo omncane. Ubilise konke imizuzu engama-40. Bese ufafaza okusanhlamvu kahle ngodaka wokhuni bese uqhubeka nokupheka eminye imizuzu eyi-10. Susa emlilweni, hlikihla inqwaba bese ucindezela ngokusebenzisa i-nylon noma i-cheesecloth. Thatha umkhiqizo (ubisi lwe-oat) uhhafu wengilazi kathathu ngosuku ngaphambi kokudla.
11. Kuyasiza kakhulu ebuhlungwini bokuphuza ama-pancreas ukuphuza ujusi kusuka kumazambane. Kufanele idakwe amahora amabili ngaphambi kokudla. Ngemuva kwemizuzu engu-5 ujusi, kufanele uphuze i-kefir engenamafutha.
12. Susa ukuhlaselwa kwe-pancreatitis nezimbali kumazambane. Ukuze wenze lokhu, lungiselela ukumnika okunjalo: izipuni ezintathu zezimbali zithululela ama-300 ml wamanzi abilayo futhi ugcizelele ku-thermos amahora amathathu.
Thatha lesi sidakamizwa isigamu sehora ngaphambi kokudla. Idosi: 100 ml. Inkambo yokwelashwa: inyanga eyodwa. Ukumnika ngokushesha ngokwejwayelekile umsebenzi womzimba.
13. Amadevu wegolide asiphatha kahle lesi sifo. Ikhulula izinhlungu nokuvuvukala, ibuyise i-gland. Lungiselela i-decoction. Thatha amaqabunga ama-4 wesitshalo, osikiwe ngommese bese uthele ilitha lamanzi abilayo. Imizuzu engu-20. Bayeke basebenze amahora ama-6. Thatha ama-50 ml kathathu ngosuku imizuzu engama-25-30 ngaphambi kokudla.
14. Ukwelashwa kwabantu okwaziwayo kwe-pancreatitis nge-brine yeklabishi. Kufanele kudakwe isipuni esisodwa imizuzu engama-25-30 ngaphambi kokudla.Ngesikhathi esifanayo njenge-brine, thatha, ushintshana zonke ezinye izinsuku, i-tincture ye-calendula kanye ne-tincture ye-chaga. I-Calendula idinga ukuthatha isipuni enkomishini yekota yamanzi. Chagi - isipuni esisodwa ingilazi yamanzi.
Amakhambi e-Folk angakwazi ukudambisa izinhlungu, enze kube lula ukusebenza kwamanyikwe, asize ukufeza ukuxolelwa kwesifo. Kepha kufanele ulungele ukulahla imikhuba emibi, unamathele ekudleni futhi uhambisane nendlela yokuphila enempilo. Ungakhohlwa ukudla amavithamini nokuqinisa ukungatheleleki kwakho.
Ukwelashwa kwe-pancreatitis ngesitshalo se-pancreatic isimangaliso
IKrythea luhlobo olukhethekile, olungandile kunalokho lwama-moss olukhula esiqwini sezinye izihlahla: i-fir, uphayini, i-birch, i-poplar ne-beech.
Emithini yendabuko, kunezinhlobo ezimbili zekryptei ezisetshenziswayo:
IKrytheu yase-Amur, izwe lakubo liyizifunda zaseMpumalanga Ekude: I-Khabarovsk Territory kanye ne-Amur Region. Lolu hlobo lubhalwe eNcwadini ebomvu.
I-Krytheu Omnidirectional - lokhu kungummeleli wezimbali ezingaphansi komhlaba. Ikhula eCaucasus, eBalkan peninsula, eKrasnodar Territory naseTurkey.
Kunzima kakhulu ukuhlangana neKrythea ehlathini, ifakwe kuRus Red Book njengesitshalo esingavele sengozini yokuphela.
Kunzima ukuthola iKryphaeus emashalofini ezitolo zezidakamizwa. Kepha e-Antalya kunezindawo ezikhethekile lapho ezitolo ezincane zabelaphi bendawo nabasebenza ngamakhambi ungasithola lesi sitshalo esingandile. Ukwelashwa kwe-pancreatitis, isetshenziswa kwifomu lomhlabathi owomile noma ngendlela ye-infusions kanye ne-decoctions.
Isenzo se-Pharmacological se-krifei
IKrythea iyithuluzi elisebenzayo ekwelapheni i-pancreatitis, ukwakheka kwezilonda nezinye izifo zohlelo lokugaya ukudla. Lokhu kungenxa ye-product s s methylmethionine eyingqayizivele, eyingxenye yesitshalo. Izakhiwo zalo ziqukethe amandla okushintsha ibhalansi ye-acid yephepha lesisu, ukwandisa izinqubo zokuvuselela kabusha.
Ukusetshenziswa kwama-tinctures kusuka ku-krifei kuthinta kahle imisebenzi yezemfihlo yamanyikwe: ukukhiqizwa kwe-insulin, ama-enzyme wokugaya - i-lipase, i-amylase, i-proteinase, enomthelela ekwenzeni ngcono inqubo yokugaya.
Ukusetshenziswa kwaso njalo kusiza ekuhlaseleni ukuhlaselwa kwenhliziyo nenhlungu. Ngaphezu kwalokho, lesi sitshalo kusiza ukudambisa izimpawu zesifo somoya, komzimba. I-Krythea ayinikezi imiphumela emibi ngendlela yokwehla kokugxilwa ukunakwa noma ukozela.
I-Krythea inconyelwa ukwelashwa ezimeni ezilandelayo:
I-pancreatitis, engalapheki futhi i-acute,
Izifo ze-peptic nezokuvuvukala zamapheshana emathunjini, isibindi, i-gallder,
Ungayisebenzisa kanjani i-tincture yotshwala: ama-20 ehla kathathu ngosuku cishe isigamu sehora ngaphambi kokudla. Inkambo yokwelashwa iyizinyanga ezintathu, ngemuva kwalokho sekwenziwe ikhefu lezinsuku ezingamashumi amathathu. Ukwelapha, uma kunesidingo, kuyaphindwa kathathu kuya kane ngonyaka.
Ukusebenza kahle kwe-krifei in pancreatitis engapheli
Umphumela wokwelashwa kwe-krifei uyabonakala ngemuva kokusetshenziswa umuthi okwenziwa amasonto amabili. Inhlalakahle ejwayelekile, ukubuyela emuva kobuhlungu obuqaphelekayo kuyaphawulwa. Kepha ukuthuthuka okubonakalayo akwanele ukukufeza, kubalulekile ukukugcina. Lokhu kusho ukugcina indlela yokuphila enempilo, equkethe ukulandela ukudla okhethekile - ukwenqatshwa kwamafutha, okubhemayo, okubunjiweyo, kanye nokungabinabo utshwala neziphuzo zekhabhoni. Futhi, ngokweqiniso, kubalulekile ukuthola inkambo ephelele yokwelashwa ehlala izinyanga ezintathu, ngoba izifo ezingamahlalakhona ngeke zelapheke emavikini ambalwa. Lokhu kuzodinga ukukhuthazela nokubekezela. Kungokugcina le mithetho kuphela lapho umuntu angathola khona imiphumela emihle ekwelapheni i-pancreatitis engamahlalakhona.
Ukwelashwa kwe-pancreatitis ye-chicory
Ukwelashwa kwe-pancreatitis nge-chicory kungenye yezindlela eziphumelelayo zokulwa nokulimala kwe-pancreatic egcwele futhi engalapheki. Ukusetshenziswa njalo kwe-chicory kuzosiza ukuqeda ukuqhakaza, izihlalo ezikhululekile kanye ne-flatulence. Ukudla kuzokuyeka ukuphendula ngomzwelo wesisindo, umsebenzi wegaya wokugaya ukudla uvamile.
Isiphuzo esisekelwe ku-chicory siyindawo yokugcina izinto esetshenziselwa umzimba womuntu, kufaka phakathi:
Amavithamini we-B: B1, B2, B3,
Ama-Macro nama-microelements: i-potassium, i-sodium, i-calcium, i-magnesium, i-iron, njll.
Ngokwesakhiwo se-chicory kune-inulin, futhi amaphesenti ayo angafinyelela kuma-75%. Kuyinto i-inulin ebaluleke kakhulu ekwenzeni ukuthi uhlelo lokugaya lube nokusebenza okujwayelekile.
Imiphumela engatholwa ngokusebenzisa i-chicory ejwayelekile:
Susa ukuvuvukala kumanyikwe.
Letha ushukela wegazi ubuye kwesejwayelekile.
Hlukana nohudo kanye ne-flatulence.
Iresiphi. Ukuze uthole ukwelashwa, uzodinga i-chicory ejwayelekile yomhlabathi, ngaphandle kwezengezo. Ungayiphuza esikhundleni setiye, ngemuva noma ngaphambi kokudla ngakunye. Lo muthi wemvelo awuqukethe nje kuphela izithasiselo zamakhemikhali, kodwa futhi unokunambitheka okuhle kakhulu. Ngakho-ke, kubantu abaningi abahlushwa ukuvuvukala kwama-pancreas, lokhu kuphathwa kuzokujabulisa.
Ungaphuza i-chicory ngendlela yayo emsulwa, ungene esikhundleni sekhofi. Ithisipuni elilodwa le-powder lanele ngengilazi eyodwa.
Uma ukunambitheka kwe-chicory kungafani, khona-ke ungalungisa enye yezinketho zeziphuzo zomuthi ezilandelayo:
Brew itiye elisha, engeza ubisi oluncane nengxenye yesipuni se-chicory engilazini. Uma ufisa, isiphuzo sivunyelwe ukuba sinambithe kancane. Hlanganisa uphuze zonke izakhi ngaphambi kokudla okulandelayo.
Ingilazi yamanzi abilayo izodinga isipuni sikakhokho, isipuni sobisi esomile kanye ne-1/2 ithisipuni le-chicory. Zonke izakhi zixubene futhi zifakwe imizuzu eminingana.
Ngaphezu kokuthuthukisa inhlala-kahle kanye nesitulo, ukusetshenziswa kwe-chicory okujwayelekile kukuvumela ukwenze umfutho wegazi ube ngokwejwayelekile. Isiphuzo sisiza ukwehlisa amanani aso aphezulu futhi sikhuphule ingcindezi ephansi. Ngakho-ke, i-chicory kufanele idakwe kokubili kwe-hypertensive kanye ne-hypotensive.
Amathiphu awusizo. Kumele kubhekwe ukuthi ngosizo lwe-chicory kuphela, ngeke kwenzeke ukuthi ususe izinkinga ngama-pancreas. Qiniseka ukuthi ulandela ukudla. Ngaphandle kwalokho, yonke imizamo izoba ngeze.
Kungcono ukuphuza i-chicory ngaphambi kokudla, okuzokwenza umzimba ulungiselele ukudla futhi kuvuse ama-pancreas ukukhiqiza ama-enzyme adingekayo.
Phuza i-chicory kufanele ube njalo. Ukuphuza isiphuzo ngezikhathi ezithile kuzoletha impumuzo yesikhashana, futhi ukufeza ukuthuthuka okuzinzile enhlalakahleni kuyokwenzeka kuphela ngenxa yokubakhona njalo kwe-chicory etafuleni.
Ikhumini elimnyama lilungile nge-pancreatitis nomdlavuza.
Ngokusho kososayensi beKimmel Cancer Center (USA), isikhunta esimnyama (Nigellai-sativa) ebhubhisa amaseli womdlavuza we-pancreatic. Lo mphumela wokukhetha ungenxa yezakhiwo ezilwa nokuvuvukala zesitshalo.
Ezingxenyeni zembewu emnyama ekhula e-Middle East, kukhishwa isigaxa. Isakhi saso esiyinhloko, iTimokinon, sisiza ukunciphisa ukuncipha kwabalamuli okubangela inqubo yokuvuvukala esiswini. Lezi ziphetho zenziwa nguH. Arafat, uprofesa oxhumanisa naye woMnyango Wezokuhlinzwa eYunivesithi yaseT. Jefferson.
Eqenjini lokuhlolwa kwezilwane ezihlushwa ama-pancreatic tumors, ukwelashwa nge-thymokinone kukhombise ukwehla ngosayizi we-tumor (ngo-67%), ukwehla kokuxineka kwama-cytokines okuvusa ukuvuvukala kwezicubu ezithinteka umdlavuza.
Inqubo yokuvuvukala ingaba wuphawu lwezinhlobo eziningana zomdlavuza we-pancreatic. Umdlavuza we-pancreatic ungaba umphumela we-pancreatitis engamahlalakhona ye-etiology ne-sporadic etiology.
Usosayensi nodokotela H. Arafat bathi ucwaningo olusha lunikeza ithemba lokululama okuphephile hhayi nje kuphela kwiziguli ezine-pancreatitis engapheli, kodwa futhi nakuwo wonke umuntu owesabayo lesi sifo uzophenduka umdlavuza noma umdlavuza. Lesi yisigaba seziguli zangemva kokusebenza nabantu abanokuphanjaniswa kwefa. "Umphumela obonakalisiwe wokusetshenziswa kwezimbewu ezimnyama ze-caraway uvumela ukusetshenziswa kwesithako sesitshalo ukuvimbela kanye nokwelashwa kwezinqubo zomdlavuza kumanyikwe," kusho usosayensi. "Into ebaluleke kakhulu ukuphepha okuphelele kwembewu emnyama ye-caraway namafutha atholakala kuyo, ihlolwe izinkulungwane zeminyaka, ukusetshenziswa ngaphandle kwemiphumela emibi."
I-tincture ephindwe kathathu ukuvusa ukukhiqizwa kwe-insulin
Ukwenza ngcono ama-pancreas kanye nokukhiqizwa kwe-insulin kungaba yithuluzi eliqukethe izicubu ezintathu:
Gaya kwisimo se-mushy amagremu ayi-100 anyanisi. Thela amamililitha ayi-600 e-vodka. Faka umkhiqizo izinsuku ezinhlanu endaweni emnyama. Ngaphambi kokusetshenziswa, ukumnika kumele kuhlungiwe.
Thela amagremu ayi-100 amaqabunga e-walnut aqoshwe ngamamililitha angama-600 we-vodka. Shiya endaweni emnyama izinsuku eziyisikhombisa, bese kuba nzima.
Utshani obuchotshoziwe be-cuff obukhulu bamagremu angama-60 buthululelwa ngamamilimitha angama-600 e-vodka, afakwa isonto lonke, ahlungiwe.
Okulandelayo, udinga ukulungisa umuthi osuselwa ku-tinctures amathathu afakwe kuhlu: milliliters we-anyanisi we-anyanisi, ama-milliliters angama-60 we-tincture kusuka emacembe e-walnut, ama-milliliters angama-40 we-cuff tincture. Umuthi ophelile uphuza isipuni ngaphambi kokulala nemizuzu engama-20 ngaphambi kokudla kwasekuseni.
Iresiphi enempilo ye-pancreatitis
I-Corn stigmas, i-calendula, i-chamomile yasensimini, i-peppermint, i-plantain (ene-acidity ephansi) kufanele ixutshwe ngokulingana okulinganayo, thatha izipuni ezi-4 zokuqoqeka bese ukhiqiza cishe u-800 ml wamanzi abilayo, uthele kubhavu wamanzi imizuzu engu-15, bese uyidedela ibe ngu-45 imizuzu, ubunzima.
Ukufakwa kungagcinwa esiqandisini izinsuku ezinhlanu. Udinga ukuthatha izikhathi ezi-3 ngosuku imizuzu engu-15 ngaphambi kokudla, inkomishi engu-1/4, uvuselele amanzi afudumele wendebe engu-3/4.
I-Kvass ku-celandine ngokusho kweBolotov
U-Kvass, odalwe ngokuyalelwa ngumbhali wesayensi u-B.V. Bolotov, umuthi owenziwe nge-Whey, celandine noshukela. Inezinto ezilwa nokuvuvukala nezokuhlanza. I-celandine eyingxenye yokwakhiwa iqukethe izinto eziningi eziwusizo: uwoyela obalulekile, ama-flavonoid, amavithamini, ama-organic acid, ama-saponins, umunyu, cishe ama-alkaloids angama-20 - amakhompiyutha anobuthi, athi, ngaphansi kwethonya lama-enzymes we-serum, afakwe ukuvutshelwa futhi aguqulwe abe yizinto eziwusizo.
IKvass inomphumela we-bactericidal, ibhubhisa imvelo ye-pathogenic futhi ikhuthaze ukuvuselelwa kwezicubu zomgudu wesisu, ivimbe ukuvuvukala, futhi iqede nobuhlungu. Kusetshenziswa ngempumelelo enkulu ukwelapha i-pancreatitis engapheli. Ngaphezu komphumela ozuzisayo ohlelweni lokugaya ukudla, umphumela wawo omuhle ubalulekile ekuphazamisekeni kwemizwa, ukugula kwenhliziyo, dysbiosis, izifo zesikhumba, isifo sofuba, i-myopia. Amandla okuvuselela amaseli futhi avimbele ukukhula kwamagciwane kuvumela ukusetshenziswa kwe-Bolotov kvass ekwelapheni i-oncology, ukukhuphula ukungaziphathi kahle, kanye namanxeba okuphulukisa nezilonda.
Isiphuzo esilungiselelwe kahle sinokunambitheka okumnandi nephunga elimunyu elifana negilebhisi ne-apula.
Amanzi ama-Whey noma ahlanziwe - amalitha amathathu.
I-ukhilimu omuncu wemvelo akukho ngaphezu kwama-15% amafutha - isipuni esisodwa.
Ushukela oxoviwe - ingilazi eyodwa.
I-celandine eyomile - i-25 amagremu (isigamu seglasi) noma ingilazi yotshani obusha.
ISerum (amanzi) ithululelwa embizeni enamalitha amathathu, engeza ushukela, ukhilimu omuncu. Utshani be-Celandine kufanele bubekwe esikhwameni se-gauze esiboshwe ngezendlalelo ezintathu noma ezine (i-gauze kumele ibe yinyumba), lapho umthwalo, ngokwesibonelo, wenziwe ngetshe, ingilazi noma insimbi engagqwali, noma yikuphi ukusikwa kungalingana. Isikhwama semithwalo notshani siboshwe ngokuqinile futhi sehliselwe phansi komsele. Intamo yesitsha idinga ukumbozwa nge-gauze, ilungiswe futhi ihlanzwe endaweni emnyama, efudumele. I-kvass iphekwe izinsuku eziyi-14, kuthi lapho isikhunta kufanele sisuswe nsuku zonke ebusweni bayo futhi kuxutshwe.
Ngosuku lwesihlanu, lapho udweshu ubonakala ezansi kwezitsha (ulahliwe), isendlalelo esingaphezulu se-kvass sithululelwa kwenye imbiza enamalitha amathathu, isikhwama esinotshani sibekwa lapho bese amanzi engezwa kuso. Ngemuva kosuku lweshumi, isiphuzo siqala ukufenda, lokhu kusabela okujwayelekile kwe-kvass elungiselelwe kahle. Ngosuku lweshumi nanhlanu, ilitha lokufakwa okuqediwe lithululelwa emgqonyeni, lisuswa endaweni epholile ongayisebenzisa, bese kufakwa amanzi noma i-serum kvass esele ukuyiletha kumthamo wayo wangaphambilini.
Ngale ndlela, isiphuzo singavuthwa amahlandla amane. Ngokulandelayo, i-kvass entsha ilungiswa ngendlela efanayo, ngemuva kokugeza isitsha, lapho umkhiqizo omusha uzokwazi ukukhululeka.
Ukwelashwa kwe-pancreatitis kuqala ngesilinganiso esincane - isipuni kathathu ngosuku imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla. Uma okwezinsuku eziyisikhombisa ingekho imiphumela emibi ngohlobo lwe-bradycardia, isicanucanu, ukusabela komzimba, ungangeza umthamo ube ngamamililitha ayisikhulu kathathu ngosuku bese uqhubeka nokuphuza lesi siphuzo amanye amasonto amathathu. Ukuhlanganisa umphumela wokwelashwa, kunconywa ukwelula ukusetshenziswa kwe-kvass enye inyanga, uthathe isigamu sengilazi kanye ngosuku. Le ndlela yokwelashwa isiza ukuqeda izinhlungu ezibucayi ne-nausea.
Ijusi leBrussels liyahluma ngokusho kweresiphi N.V. I-Walker ye-pancreatitis kanye nesifo sikashukela
N.V. U-Walker ungudokotela waseMelika ogqugquzela ukuthi kudliwe kusetshenziswe amajusi emifino amasha. Yena uqobo wanamathela ekudleni okunjalo nasekuziphatheni okunempilo futhi waphila cishe iminyaka eyikhulu. KwakunguWalker okwathi phakathi nokufunda, waveza inhlanganisela efanelekile yemifino, amajusi ayo anethonya lokwelapha kumanyikwe.
Le mifino ifaka phakathi:
Ubhontshisi wentambo eluhlaza.
Ukuhlanganiswa kwamajusi kusuka emifino engenhla kusetshenziselwa ukubuyisela imisebenzi ye-pocrreas ne-intracecretory ekhethekile, ekwelapheni isifo sikashukela i-mellitus, i-pancreatitis.
Iresiphi nendlela yokusebenzisa:
Izakhi ezithathwe ngamanani alinganayo (AmaBrussels amahlumela, ulethisi, izaqathi kanye nobhontshisi oluhlaza) kumele zidlule ngejusi. Ijusi lidliwa engxenyeni yengilazi ekuseni ngaphambi kokudla. Inqubo yokwelashwa isuselwa ekudleni okune-carb ephansi, ukuqedwa kwesitashi, ushukela ekudleni, kanye nokuhlanzwa kwamathumbu ejwayelekile nge-enema. Inkambo yokwelashwa iyizinsuku ezingama-30, ngemuva kwalokho kufanele iphazanyiswe amasonto amabili. Uma kunesidingo, ngemuva kwekhefu lamasonto amabili, ukwelashwa kuyaqhubeka.
Ukwelashwa kwe-pancreatitis ngembewu yefilakisi
Imbewu yefilakisi inamandla amakhulu okuphilisa. Zisetshenziselwa ukwelapha izifo eziningi, kepha umphumela wazo oyinhloko kuhloswe ngawo ukwenza imisebenzi yezitho zokugaya, ikakhulukazi ama-pancreas. Lokhu kungenxa yomphumela wokumboza othambile, kanye nekhono lokulinganisa i-acidity nokukhipha ubuthi. Imbewu isetshenziswa njengejelly ne-decoctions, ukusetshenziswa okujwayelekile kwayo okusiza ukuqeda izimpawu ezihambisanayo ze-pancreatitis - ubuhlungu, ukudakwa, izinqubo zokuvuvukala. Kepha impahla esemqoka yeflaxseed yikhono ukuvimba ukuthuthukiswa kwamaseli wamathumbu.
Ngaphezu kwalokho, imbewu inomphumela wokuhlanza obekiwe. Lokhu kuyindlela enhle yokuvikela i-atherosulinosis yemithambo yegazi kanye nomfutho wegazi ophakeme. Kuyasiza ukwehlisa i-cholesterol, ukuqinisa ukungatheleleki, umfutho wegazi ophansi. I-Flaxseed kufanele isetshenziswe ngokunakekelwa okukhulu, ukusetshenziswa kwayo kuyingozi kubantu abane-urolithiasis. Ungayiphathi imbewu yefilakisi ngaphandle kokuxhumana nochwepheshe futhi wenze ukuhlolwa okufanele.
Amaresiphi wezinto zefilakisi nejeli
Ukwenza ijeli, udinga isipuni sembewu nengilazi yamanzi.Izakhi zihlanganiswa futhi zifakwe emlilweni ohamba kancane. Ngemuva kokubilisa imizuzu eyi-10, akuyeke kube yihora. Ngaphambi kokusebenzisa, ujeli uyahlungwa. Udinga ukuyiphuza ekuseni ngaphambi kokudla. Kukhona inketho yokupheka esheshayo. Ukuze wenze lokhu, gaya imbewu kwi-grinder yekhofi, ubeke ngomlilo bese upheka imizuzu engu-5. Bese upholile futhi uxakeke.
Kulezi zinketho ezimbili ezichazwe, ezokuqala zithathwa njengezisebenza kahle kakhulu:
Indlela elula yokwenza ijeli yilena elandelayo: thela ilitha linye lamanzi abilayo ku-thermos, engeza izipuni ezintathu zembewu, vala bese ushiya ukuyifaka. Umkhiqizo udinga ukulungiswa kusihlwa, khona-ke ekuseni kusale kuphela ukushukumisa, ukuwuhluza bese uwuthatha imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla, uhhafu wengilazi kathathu ngosuku.
Ukupheka umhluzi. Hlanganisa amagremu ayi-80 embewu yefilakisi nelitha lamanzi epanini lokuthosa, ulethe ku-thumba, imizuzu imizuzu emibili, amboze ngokuqinile ngesivalo.
Isikhathi sokwelashwa kwe-pancreatitis ngembewu yefilakisi izinyanga ezimbili. Kungemva kokusetshenziswa njalo kwe-ejenti yokwelapha lapho umphumela onempilo olindelekile ungalindelwa.
Ukwelashwa kwe-pancreatitis ne-pancreatic cancer fungus-hericium
I-Hericium comb, ebizwa ngenye indlela ngokuthi yi-Blackberry mushroom ingukuthola kwangempela ekwelapheni i-oncology. I-mushroom enkulu, efinyelela kububanzi amasentimitha amane, ikhula eziqubeni ezibolile neziqu zemithi. Ngokubukeka, amakhowe afana ne-hedgehog ephuzi ephuzi nezinaliti ezithambile nezinde, yingakho igama elithi amajikijolo.
Imithi yaseMpumalanga isebenzise isikhathi eside ukuphulukisa kweHericium ekwelapheni ukungabinamandla, ukuphazamiseka kwezinzwa, ukuqwasha, isifo se-Alzheimer, isifo samathumbu, izifo zomgudu wesisu, izifo zesibeletho. Namuhla kusetshenziselwa ukwelapha umdlavuza wegazi, umgogodla womlomo, ubuchopho, isikhumba, isibindi, ama-pancreas nezinye izitho zesistimu yokugaya kuhlangene ne-chemotherapy noma njengendlela yokuzelapha yokuzimela.
Izici zayo zokuphulukisa zibangelwa ama-polysaccharides angavamile akhona ekwakhiweni, njenge-beta-glucans, kanye nama-acid acid YA-2 kanye nama-phenols, akwaziyo ukuthuthukisa imiphumela ye-chemotherapy ngezikhathi ezithile.
EJapan, elabhorethri, amangqamuzana omdlavuza afakwa kumagundane, khona-ke isimila esiphumela lapho selashwa ngeHericium. Ngenxa yalokho, ukwakheka kwe-oncological kumise ukukhula nokukhula, futhi kwezinye izimo kwehla ngosayizi.
Izindlela zokulungiselela nokusetshenziswa
I-Hericium ingathengwa ngohlobo lwe-powder kuphela kumasayithi akhethekile e-Intanethi, ngoba lesi yisitshalo esingavamile kakhulu esisohlwini lweRed Book.
Izindlela zokusebenzisa i-Hericium powder ekwelapheni ama-pathologies we-pancreas and oncology:
Cwilisa igremu elilodwa likafulawa engilazini yamanzi afudumele bese ushiya ubusuku bonke. Thatha umuthi enkomishini engu-1/3 imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla.
Lungisa umuthi njengoba uchaziwe ngenhla uwuphuze ngokuphelele ihora ngaphambi kokudla kwasekuseni.
Thela amagremu ayi-10 kafulawa ngamamililitha ayikhulu ayi-vodka. Cwilisa endaweni emnyama epholile izinsuku eziyi-14. Ukuvimbela umdlavuza, phuza isipuni, ukwelashwa - isipuni kathathu ngosuku.
Ukushisa i-olive olive noma i-sunflower oil (ama-milliliters ayi-150) kubhavu wamanzi kuya ku-37 ° C Faka amagremu ayishumi kafulawa, hlanganisa bese ushiya endaweni efudumele amahora amathathu, bese ususa izinsuku ezinhlanu endaweni epholile. Ukuvimbela umdlavuza, phuza isipuni, ukwelashwa - isipuni kathathu ngosuku.
Ukwelashwa kwe-pancreatitis ngejelly yasebukhosini
I-Royal jelly ingumkhiqizo wezinyosi. Kugcinwa emithanjeni engaphezulu yomhlathi nemihlathi yamaphara abahlinzeki bezinyosi ngenkathi kudliwa izibungu bese kuqongelela otshwala bomama.
Umkhiqizo unephunga elingajwayelekile, ukunambitheka kwesiqhingi esimuncu, umbala omhlophe, kwesinye isikhathi okune-cream tint, ukuvumelana kokhilimu omuncu kanye nokunikezwa okuningi kwezinto zokuphulukisa. Le yi-biostimulator enamandla equkethe cishe zonke izinto ezibalulekile ezidingakalayo empilweni yomzimba womuntu.
Ukwakheka nezinzuzo zejelly yasebukhosini
Ukwakheka jelly yasebukhosini:
Amaprotheni, ama-carbohydrate (i-fructose, ushukela), amafutha.
Amavithamini A, C, D, E, H, PP, Iqembu B.
Amaminerali - i-bismuth, i-calcium, i-potassium, i-manganese, ithusi, i-chromium, i-sodium, i-cobalt, i-iron, i-magnesium, i-nickel, i-phosphorus.
Izinhlobo ezingama-22 zama-amino acid adingekayo emzimbeni.
Ama-hormone afana ne-testosterone, estradiol, progesterone.
Ama-enzymes abalulekile emzimbeni - i-cholinesterase, i-amylase, i-invertase, i-glucooxidase, njll.
Ngenxa yokwakheka kwayo okucebile, i-jelly yasebukhosini inomphumela onenzuzo kuzo zonke izinhlelo nezitho zomuntu, ngakho-ke isetshenziselwa ukwelashwa nokuvinjwa kwezifo eziningi. Inezinzuzo ezinkulu kumanyikwe, ngoba iqukethe izinto ezivumela umsebenzi walesi sijwayelekile.
Ububanzi balo mkhiqizo bukhulu kakhulu: ukusuka kumakhemisi kuya ku-cosmetology. Muva nje, kuye kwaba nomkhuba wokukhulisa ukusetshenziswa kobisi lwenyosi njengokudla. Ngakho-ke, eJapan, izinga lokusetshenziswa kwalo mkhiqizo selidlule kakhulu ithuba lokukhiqizwa kwalo ezweni.
Ukusetshenziswa kobisi lwezinyosi i-pancreatitis
Ukusetshenziswa kobisi lwejelly yobukhosi ngokwezigaba - ngendlela ye-resorption yiyona ephumelela kunazo zonke. Ngakho-ke izakhi ezizuzayo eziqukethwe kuyo zidonswa ngokushesha ukungena kwegazi futhi zisakazeka emzimbeni wonke. Ngaphezu kwalokho, lapho ingena esiswini, izinto eziningi zibhujiswa futhi zilahlekelwe yizinzuzo zazo ngaphansi kwethonya lama enzymes wokugaya ukudla.
Isimo sansuku zonke sejelly yasebukhosini kumdala asidluli kuma-milligrams ayi-100. Ukwelashwa kwe-pancreatitis, kunconywa ukuthatha isipuni kathathu ngosuku, ukuxazulula isikhathi eside ngangokunokwenzeka.
Ungasebenzisa futhi izinyosi zezinyosi - ucezu olulodwa ngesikhathi noma uhlanganise ubisi noju. Inkambo yokwelapha isukela ezinyangeni ezimbili kuya kwezintathu, bese kunconywa ukuthatha ikhefu lezinsuku ezingamashumi amathathu.
Ngingawuthenga kuphi ijeli wasebukhosini?
Ijelly yasebukhosini ingathengwa emakethe. Kepha kunengozi lapha ukuthenga izinto ezisezingeni eliphansi. Iqiniso ngukuthi ubisi lingumkhiqizo obucayi kakhulu odinga izimo ezikhethekile zokugcina, ukwephulwa kwalo okuholela ekulahlekelweni yizinto zalo zokupholisa. Ukuze kwandiswe impilo eshalofini yobisi lwezinyosi, izinkampani ezifuya izinyosi zisebenzisa izindlela eziningana:
Ukubanda. Ngokushisa kwamadigri ayishumi nesishiyagalombili, impilo yeshalofu ingafinyelela unyaka owodwa nohhafu.
Ukuwafaka nge-lactose noshukela. Ngaphezu kwalokho, impilo yeshelufu ngamadigri ayisithupha cishe izinyanga eziyishumi.
Ukuwafaka ngoju. Impilo yeshelf yeminyaka ecishe ibe mibili ekushiseni okupholile.
Ungathenga ubisi lwejelly yasebukhosini ngezindlela eziningana:
Ngefomu eqandisiwe, yiyona ebaluleke kakhulu, ngoba igcina zonke izinto eziwusizo.
Ngefomu elomile, kuyisisindo esinamandla lapho izinto eziningi ezizuzisayo sezivele zichithwe. Ubisi olunjalo aluthwali inzuzo enkulu.
Kuhlanganiswe noju. Kulokhu, ubisi alulahlekelwa yimpahla yalo ezuzisayo, futhi uju lusebenza njengesibambiso semvelo. Ungawuthenga lo mkhiqizo kubasabalalisi benkampani i- "Tentorium", okungelokuqala ekwakhiweni kwemikhiqizo yezinyosi.
Ezemfundo: Idiploma ekhethekile ye- “Medicine” ne- “Therapy” yatholwa eN.I Pirogov University (2005 no-2006). Ukuqeqeshwa okuthe xaxa eMnyangweni we-Herbal Medicine e-Peoples 'Friendship University of Moscow (2008).
Izindlela Zokupheka Zezinwele Ezingenelwa Kakhulu Eziphumelela Kakhulu!
Izimpawu ezi-7 ezikhathazayo zobuhlungu besisu
I-pancreatitis ukuqubuka kwamanyikwe. Imbangela ye-pancreatitis ukuvela kokukhipha inyongo ngamatshe kusuka gallbladder, isimila noma i-cyst. Esimweni esinjalo, ukuphuma kwejusi yokugaya enama-enzyme esibelethweni esincane kuyahluleka. Lezi enzymeni pancreatic buthelela nge.
Ngendlela ebabazekayo yalesi sifo, izinhlungu zitholakala endaweni ngaphansi kwesipuni engxenyeni engenhla, i-hypochondria engakwesobunxele nangakwesokunene, uma wonke umqubuko uthintekile, khona-ke izinhlungu ziyizicucu. Futhi, isiguli siqala ukuhlanza nge-admixube ye-bile, okungamlethi impumuzo.
Kukhona izitshalo eziningi zokwelapha ezinomphumela onenzuzo esimweni sokusebenza kwamanyikwe futhi zinomthelela ekwenzeni umsebenzi wazo ube ngcono. Ukwelapha ngamakhambi kufanele kubhekwe njengethuluzi elengeziwe ekwelashweni kwezidakamizwa okuyinkimbinkimbi.
Ukudla kwe-pancreatitis, ikakhulukazi okwamahlalakhona, kubaluleke kakhulu ukukuqaphela. Kufanele udle amaprotheni amaningi ngangokunokwenzeka futhi ngasikhathi sinye udinga ukunciphisa noma ukuqeda ngokuphelele amafutha nama-carbohydrate, ikakhulukazi ushukela, okuyi-99% carbohydrate, ukungafaki ukudla okuthosiwe nanoma yimiphi imikhiqizo equkethe i-fiber coarse. Kungcono ukuqala.
Uma ufuna ngempela ukwelapha i-pancreatitis noma isifo sikashukela, ngifuna ukukunikeza ukuthi ubuke ividiyo ebaluleke kakhulu ukuxazulula le nkinga. Le vidiyo, ngicabanga ngebhomu lekhulu lama-21 emkhakheni wezempilo yabantu. Uma kungenzima, yabelana ngayo nabangane bakho, umndeni nabathandekayo. Sonke.
Imvamisa, ukwelashwa kwenziwa esibhedlela. Umuntu ogulayo unikezwa umuthi wobuhlungu, futhi kwenziwa uhlelo olukhethekile lokuqeda ukuvuvukala. Nge-pancreatitis, umoya kanye noketshezi kwesinye isikhathi kuqongelela esiswini, okungadala ukugabha okukhulu. Phambi kwezimpawu ezinjalo ngesikhathi sokwelashwa.